Hoyga Aqoonta - Shardiyada iyo qaanuunnada golaha.
Shardiyada iyo qaanuunnada golaha.
Shardiyada iyo qaanuunnadaHoyga Aqoonta
Is qoritaanka goluhu waa mid bilaash ah, waxaanuna ku'adkaysanaynaa inaad tix geliso qaanuunka iyo shardiyada inaad raacdo hoos ku xusan. Haddaad oggolaato shardiyadan,fadlan riix afar geeska "Akhriyay"ee hoos ku xusan markaana riix "Is qorid" haddaad rabto inaad joojisana riix Halkan Si'aad ugu noqoto bogga guud.
Maammulayaasha iyo kormeerayaashuba Hoyga Aqoonta isku daygooda ay isku dayayaan inay joojiyaan ama hor is taagaan dhammaan ka qayb gelidda sharci jebin, ha'u arkin in qof loo dan leeyahy balse,ma'awoodaan inay bandhigaan dhammaan ka qayb gallada iyo mowduucyada u taagan ra'yiga qoraaga ee wata af lagaaddo iwm.
Mas'uuliyaddeedana maammulku ma qaadayo Hoyga Aqoonta iyo mas'uuliyad waxa la qorayba oo ah ka qayb galba.
Riixidda aad riixdo "Is qorid"-da hoos ku xusan, waxaad oggolaatay inaadan soo bandhigin wax qaanuunka goluhu diidayo. Maammulku xaq buu u leeyahay inuu tir-tiro,joojiyo,hagaajiyo amaba xiro mowduuc walba oo ay u arkaan inuu ka soo hor jeedo sharciyada golaha khasabna laguma leh inay soo bandhigaan
Inaan xubin la'af lagaaddayn ama shu'uunihiisa iyo wixii u gaara faraha lala gelin.Inaan qof caan ah oo Soomaaliyeed la'af lagaaddayn.Aqoonyahan baad tahay markaad golahan soo gasho taasi shaki maleh.
Ilaahayna qur'aankiisa ayuu ku sheegay isaga oo leh: ((ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد))
Fadlan 4 geeska dhanka bidix kaa qabanaya riix ee ay ku ag qorantahay (Akhriyay)
Saacaddu hadda waa 04:24 AM.